Ireo fanambarana tamin'ny taona 2006 | SEFAFI
Ireo fanambarana tamin'ny taona 2006
Mba hisian'ny fifidianana filohan'ny repoblika malalaka sy mangarahara kokoa
Ao anatin’ny fanomanana ny fifidianana filohan’ny repoblika ho avy dia efa naneho ny ahiahiny ny SeFaFi ny amin’ny rafitra feran’ny Lalàna momba an’io fakana ny hevi-bahoaka io sy ny famatsiam-bola ny fampielezan-kevitra1.
Taorian’izany, tamin’ny faran’ny aprily, dia nanao filan-kevi-pirenena ny CNOE – Fanabeazana olom-pirenena ka nasainy tamin’izany ny andrim-panjakana rehetra mpandray anjara amin’ny fifidianana, ny antoko politika ary ny fikambanana ao amin’ny ...
Omanina tsara ny fifidianana filohan'ny Repoblika
Na inona na inona andro hoferana hanaovana ny fifidianana ny Filohan’ny Repoblika dia ny taona 2006 no taona hanomanana an’izany. Noho ny fahefana omen’ny Lalàmpanorenana ny Filoha, dia zava-dehibe eo amin’ny fiainan’ ny firenentsika ny fifantenana an’izay ho Filohan’ny Repoblika. Zava-dehibe indrindra àry ny hanomanana amim-pitandremana an’izany fifidianana izany. Te hitondra ny anjara birikiny amin’izany ny SeFaFi, mba hampizotra tsaratsara kokoa an’izany fifid...